Endrey ny maha samy hafa ny tsiky iray! | Martech Zone
Alatsinainy Martsa 12, 2007 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Isaky ny nanova ny lohahevitra bilaogiko aho dia namela ny sariko teo amin'ny pejy voalohany. Isaky ny mandao azy aho dia mahazo mailaka sy hevitra an-taonina maro manontany hoe aiza izy io! Tsy hanao izany hadisoana izany intsony aho - mahavariana ahy ny habetsaky ny hevitra sy ny toetrany entin'ity tranonkala ity. Tsy narcissistic aho amin'ny lafiny rehetra, sahirana aho mametraka ny sariko ao amin'ilay tranonkala. Na izany aza, tsapako tanteraka fa sarotra ny manangana fifandraisana amin'ny olona mbola tsy hitanao.
Raha resaka bilaogy no resahina, ahoana no anaovanao resaka amin'ny olona tsy hitanao? Ekeko fa, alohan'ny ampidiriko ao anaty lohateny ny mug mitsiky, dia tena nanjary Generic be ilay tranonkala. Manontany tena aho hoe inona ny fiantraikan'ny tarehy mitsiky amin'ny fitomboan'ny bilaogy. Azo antoka fa misy fiantraikany kely izany.
Ny tifitra glamor etsy ambony dia nalaina tokony ho 4 taona lasa izay raha niasa tamina dot com tany Denver, Colorado aho. Mavesatra kokoa aho, mavomavo ary malefaka kokoa noho izaho tamin'io sary nahatsiravina io. Manana talenta be io mpaka sary io! Tifitra izay hotehiriziko mandritra ny fotoana kelikely. Raha tsy hoe Mazava ho azy fa miverina miendrika endrika (hafa noho ny voahangy) aho. Manao vazivazy amin'ny olona aho fa raha tsy maintsy mihazakazaka aho na mandeha bisikileta hampandehanana ny laptop-ko dia Andriamatoa Universe aho. Azo antoka fa afaka manenjika antsika ny siansa mba hanome antsika fomba fiaina ara-pahasalamana momba ny fitendry, ny pizza ary ny fandaharana amin'ny alina, sa tsy izany?
Mandritra izany fotoana izany, hotehiriziko foana ilay glamor. Rehefa afaka mihaona aminao aho dia hahita ilay tsiky mitovy amin'izany ianao - na dia tsy dia tsara tarehy aza ny tarehy.
Wikinomics: Ahoana no hanovan'ny fiaraha-miasa marobe hanovana orinasa
Mar 12, 2007 ao amin'ny 7: PM PM
Miarahaba ny endrika vaovao. Tena tsara, ary madio.
(Ary izao ny rohy fanaovana dokam-barotra dia mankamin'ny pejy an-tsoratra tsotra izay milaza fa hamindra ahy ho any amin'ny pejy mahitsy izy io. Fa manohy mamerina ny tenany fotsiny izy io. Olana amin'ny Mac ve izany?)
Raikitra! Tena marina izany mahatsiravina kaody alefa izay nosoratako nefa tsy notsapako.
Mar 24, 2007 ao amin'ny 4: PM PM
Yep. Miasa izao. Mety te hanampy "tsy" ao anaty pejy averinao ianao 🙂
Raha toa ka mavesatra ny pejy aorian'ny 5 segondra, kitiho eto.
Inona no hataoko raha tsy eo ry zalahy ?! Misaotra!
Mar 12, 2007 ao amin'ny 10: PM PM
na dia miovaova anarana aza ny "mug" dia mahatonga azy io hahatsapa ho toerana ahazoana aina.
Misaotra, Steven! Izay tokoa no tadiaviko. Tongasoa daholo… afa-tsy ireo ratsy fanahy!
Mar 13, 2007 amin'ny 9: 09 AM
Doug! Fanatsarana lehibe!
Hiteny aho hoe: 'Aosory ilay akanjo ary hiverina amin'ilay sary mifaly izay nanananao taloha', ary avy eo dia nieritreritra segondra kely… angamba roa…
Ok, mila bandy hafa ao anaty palitao tokoa ve isika miresaka momba ny haitao sy marketing? NA INDRINDRA aza, tena te-hamaky momba ny haitao sy ny varotra avy amina kamo amin'ny akanjo ba (sary taloha) ve isika?
Ka inona no ataontsika? Mila fampifangaroana ny sary voalohany miaraka aminao mihomehy izahay, ary ny sary faharoa - fa tsy misy fatorana. Ny fijery sy fahatsapana 'Sariaka / Mampihomehy, tsy mamono, nefa mbola matihanina' ihany.
Fa hey, antsoinao io, ary ianao mbola x1000 sahy noho izaho noho ny fampiasana headshot ao amin'ny lohateninao. (Hiraikitra amin'ny lohateny ambigram azo antoka aho mandra-panovako azy… indray…) 😉
Mar 13, 2007 amin'ny 10: 55 AM
Eny ary, tadidio fa avy amina tovolahy iray izay manana ny sarimiaina ao anaty lohateny, fa toa an'i William, tiako ilay "Doug mihomehy." Saingy tsy toa an'i William, tiako ny teknolojika sy ny varotra ataoko amin'ny mpangalatra akanjo ba 🙂
Sary mahafinaritra anefa, ary ny fijery ankapobeny dia mahatalanjona - madio, madio, nefa sahisahy.
Mar 14, 2007 ao amin'ny 6: PM PM
Mihomehy aho amin'ity sary ity! Mihomehy satria liana amin'ny fahalianana aho hoe ohatrinona ny mikasika azy io hahatonga ahy ho mendrika.
Mar 13, 2007 amin'ny 11: 15 AM
Vaton'i Tony: Mihomehy Doug.
Ny vatam-pifidianako: Doug mihomehy.
Mifidiana izao! 😉
Tony: Fantatro tsara izao ny bilaoginao - ny anao dia VOAZAVA rehefa miresaka isika Robert Hruzek (middleszonemusings.com)! Momba ny asa mora iray toy ny fanaovana an'ity dia! (tokony ho volana tsara amin'ny indostrian'ny fitsaboana)
Mar 14, 2007 ao amin'ny 4: PM PM
Nahazo an'io zavatra io ihany aho tamin'ny sarin'ny saka. 🙂
Amin'ny firy izy no mahatratra ny satan'ny kolotsaina?
engtech, mahafinaritra izany!
Tsy manana saka aho. Manana Jack Russell antsoina hoe Cooper aho ary mihaza ary mamono ireo saka rehetra ireo. 🙁
Mar 14, 2007 ao amin'ny 7: PM PM
Izany resaka momba ny tarehy sy saka mitsiky rehetra izany dia tonga tamiko ka nanapa-kevitra ny hanampy Widget sidebar an'ny mascot WinExtra tokony ho antsasaky ny lalana aho LOL ..